Lahatsoratra nosoratan'i Gregg Ames
Gregg Ames no Chief Commercial Officer at Rindrambaiko Act-On, sehatra automation ara-barotra mitombo ao Portland, Oregon. Ao amin'ny andraikiny, izy no tompon'andraikitra amin'ny tetikady varotra mivaingana sy miompana amin'ny Act-On. Gregg dia faly amin'ny fikarakarana sy fanaterana traikefa amin'ny mpanjifa ambony izay mahafaly sy manaitra ny mpampiasa farany. Mitondra traikefa mihoatra ny 25 taona amin'ny fikambanana SaaS sy MarTech izy, izay nitana andraikitra ambony tao amin'ny Oracle, Kibo Commerce, Conversica, ary Turning.
Talata, Febroary 8, 2022 Talata, Febroary 8, 2022 Gregg Ames
Ny fitazonana mpanjifa dia tsara ho an'ny orinasa. Ny fitaizana mpanjifa dia dingana mora kokoa noho ny fisarihana vaovao, ary ny mpanjifa afa-po dia azo inoana kokoa fa hanao fividianana miverimberina. Ny fihazonana fifandraisana matanjaka amin'ny mpanjifa dia tsy mahasoa ny tombotsoan'ny fikambananao fotsiny, fa manafoana ny sasany amin'ireo fiantraikany tsapa avy amin'ny fitsipika vaovao momba ny fanangonana angon-drakitra toy ny fandraràna an'i Google amin'ny cookies avy amin'ny antoko fahatelo. Ny fitomboana 5% amin'ny fihazonana mpanjifa dia mifandray amin'ny fitomboana 25% farafahakeliny